La Casa di Bracco..Ubushushu kunye nemibala embindini - I-Airbnb
La Casa di Bracco..Ubushushu kunye nemibala embindini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIvan
Apartment malunga 90 square metres, ibekwe kumbindi Messina. Iibhloko ezimbini ukusuka eViale San Martino. Ifakwe kwaye igqityiwe ngayo yonke into. Umoya womoya kumagumbi omabini. Izibane ezithambileyo ze-LED. Igumbi kabini kunye TV kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi, wardrobe ezineengcango zeglasi ezintathu zeMolteni 4 amaxesha, balcony kunye nefestile. Igumbi elincinci elinekona yokufunda yabucala. Ikhitshi elikhulu eligcweleyo eligcweleyo elinokutya-ekhitshini eline hob, iwashi yokuhlamba izitya, i-oveni, ifriji, ibhodi yoku-ayina ene-boiler iron, izitya ezahlukeneyo kunye nezixhobo.
Elinye igumbi elincinci elinebhedi yesofa ephindwe kabini. Igumbi lokuhlala elinomabonakude, iDVD, kunye neencwadi ezahlukeneyo X zeentlobo ezahlukeneyo. Iibhalkhoni ezintathu, ezimbini kuzo zikwiTrento kunye necala lesithathu langaphakathi ekhitshini.
Kummandla weemitha ezingama-50 uya kufumana indawo yokumisa i-tram, iikhemesti ezintathu, indawo yokuqubha kamasipala, zonke iivenkile eziseziko, imivalo egqwesileyo engapheliyo kunye neenkonzo zazo zonke iintlobo, kufutshane nePaki yaseVilla Dante.
I-Messina centre motorway exit kwi-1 km. Isikhululo sikaloliwe saseMessina kumgama nje oyi-1 km ukusuka apho.
Ukuba yindlu yonke, iindwendwe ziya kuba nokufikelela kuzo zonke iindawo zendlu, kubandakanya ikhitshi elitofotofo nelanamhlanje elinazo zonke izixhobo kunye nefriji enkulu. Izithuba zinkulu kwaye zinobubele kakhulu, kuya kwenzeka ukuba uchithe iiyure ezimbalwa ngokukhululekileyo ekhaya, mhlawumbi ubukele iTV kwisofa ekhululekile kwigumbi lokuhlala.
46" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
Abantu bezoshishino okanye abazimele abafuna indawo yokubhekisela kumbindi weMesina ngomsebenzi wabo okanye ukuzonwabisa. Kusapho kwiholide kunye nabantwana. Ukusuka apha unokuhamba ngokulula naphi na kwisixeko ngaphandle kokuthatha nayiphi na indlela yokuthutha. I-tram imisa iibhloko ezimbini kude.
Bakwimeko epheleleyo yeendwendwe
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Messina